राष्ट्रियसभाका १७ सदस्य निर्विरोध निर्वाचित, को-को भिड्दैछन् चुनावमा ? जित्ने सम्भावना भएका उम्मेदवारहरु ( विवरण सहित) – HamroSamrachana
राष्ट्रियसभाका १७ सदस्य निर्विरोध निर्वाचित, को-को भिड्दैछन् चुनावमा ? जित्ने सम्भावना भएका उम्मेदवारहरु ( विवरण सहित)
हाम्रो संरचना शनिबार, कार्तिक ६, २०७८ 547 Views
१० माघ, नेपालगञ्ज/ आगामी माघ २४ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागी ५६ मध्ये ८३ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएकोमा बुधबार मनोनयन दर्ताकै क्रममा १७ जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । बाँकी ३९ सांसदका लागि आगामी माघ २४ गते एकल संक्रमणीय विधिबाट मतदान हुनेछ ।
निर्विरोध हुनेहरु !
प्रदेश १ बाट तीन महिला सदस्यका लागि एमालेकी नैनकला ओझा, माओवादीकी विना पोखरेल र कांग्रेसकी सरिता प्रसाईको मात्र उम्मेद्वारी परेको छ । यदि दाबी विरोध प्रक्रियाबाट उम्मेदवारी खारेज नभए उनीहरु निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा हुने निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।
प्रदेश २ बाट ५ सदस्य निर्विरोध भएका छन् । महिला ३ सीटमा माओवादीकी शशीकला दाहाल, कांग्रेसकी मुक्ताकुमारी यादव र फोरमकी प्रमिला यादवको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ । त्यस्तै दलित कोटामा फोरमका रामप्रीत पासवान र अल्पसंख्यकमा राजपा उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालको मात्रै उम्मेदवारी परेकोले निर्विरोध हुने निश्चित छ । खुलातर्फका ३ सदस्यका लागि ४ जनाको उम्मेदवारी परेको र आगामी माघ २४ गते एकल संक्रमणीय विधिबाट मतदान हुनेछ
प्रदेश ५ बाट राष्ट्रियसभामा ३ महिला सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । एमालेकी कोमल वली, मीना बुढा र कांग्रेसकी अनिता देवकोटाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ । दावी विरोध लगायतको प्रक्रिया पूरा गरेपछि उनीहरु निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा हुनेछन् ।
प्रदेश ७ बाट भने खुला र महिलातर्फ ३र३ सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । दलित र अपाङ्ग तथा अल्पसंख्यक सिटका लागि चुनाव हुनेछ । खुलातर्फ एमालेका शेरबहादुर कुँवर, माओवादीका हरिराम चौधरी र कांग्रेसका बद्री पाण्डे निर्विरोध भएका छन् । महिलामा एमालेकी इन्दू कडेरिया विष्ट र कमला ओली, कांग्रेसकी तारादेवी भट्टको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ । प्रदेश ६ मा भने सबै सिटमा चुनाव हुनेछ ।त्यसैगरी राष्ट्रियसभा चुनावका लागि माघ १२ देखि आचारसंहिता लागू हुने भएको छ ।
प्रदेश नं १ मा १२,
प्रदेश नं २ मा नौ,
प्रदेश नं ३ मा १७,
प्रदेश नं ४ मा १२,
प्रदेश नं ५ मा ११,
प्रदेश नं ६ मा १२
र प्रदेश नं ७ मा १० जनाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
राष्ट्रियसभा चुनावमा प्रदेशसभा सदस्य र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख मतदाता हुन्छन् । यी मतदाता भनेका दलहरुबाट उम्मेदवार भएर जितेका सम्बन्धित दलकै नेता कार्यकर्ता हुन् ।
जित्ने सम्भावना भएका उम्मेदवारहरु :
खेम नेपाली (एमाले)
हरिचरण सिवाकोटी (एमाले)
परशुमेघी गुरुङ (एमाले)
अगम बान्तवा (एमाले)
रमेशजंग रायमाझी (कांग्रेस)
सुमन प्याकुरेल (एमाले)
जितेन्द्र देव (कांग्रेस)
रमेश यादव (राजपा)
पार्वती रावल (एमाले)
उदया शर्मा (एमाले)
सिंहबहादुर विक (एमाले)
बेदुराम भुसाल (एमाले)
रामचन्द्र राई दनुवार (एमाले)
राधेश्याम अधिकारी (कांग्रेस)
धना खतिवडा (कांग्रेस)
रामबहादुर थापा बादल (माओवादी केन्द्र)
रामबहादुर थापा (एमाले)
गणेश तिमल्सिना (एमाले)
शान्ति अधिकारी (एमाले)
दीपा गुरुङ (एमाले)
सुरेन्द्रराज पाण्डे (कांग्रेस)
वृन्दा रानामगर (महिला)
दीनानाथ शर्मा (माओवादी केन्द्र)
खिमकुमार विक (माओवादी केन्द्र)
रामलखन हरिजन (एमाले))
खिमलाल भट्टराई (एमाले)
दुर्गाप्रसाद उपाध्याय (कांग्रेस)
राजकुमार कुँवर (माओवादी केन्द्र)
चन्द्रबहादुर खड्का (माओवादी केन्द्र)
कविता बोगटी (एमाले)
नन्दा शर्मा (एमाले)
नरपति लोहार (एमाले)
भैरवसुन्दर श्रेष्ठ (एमाले)
ठगेन्द्र पुरी (एमाले)
जीवन बुढा (माओवादी केन्द्र)
युटुल लामा (माओवादी केन्द्र)
कालीबहादुर मल्ल (माओवादी केन्द्र)
चक्रप्रसाद स्नेही (एमाले)
लालीराम लोहार (माओवादी केन्द्र)
नेपालगञ्जमा कर कार्यालय चुप-चाप : जुम्लाका ट्यूशन सेन्टर कारवाहीमा
देशभरका विभिन्न ४६ स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन (सूचीसहित)